Inter Milan oo heshiis hordhac ah oo shakhsi ah la gaartey Stefan de Vrij – Gool FM
(Milano) 24 Maarso 2017 – Inter Milan ayaa sida lasoo werinayo heshiis 4 sano ah oo hordhac ah la gaartey daafaca Lazio ee Stefan de Vrij.
Sida ku dhigan Gazzetta dello Sport, wiilkan Dutch-ka ayaa si sakhsi ah u ogolaaday inuu sanadkii €3m oo euro ugu shaqeeyo kooxda Nerazzurri waloow aanu weli jirin heshiis dhexmaray Inter iyo guddoonka SS Lazio ee Claudio Lotito.
Wada xaajoodyadii qandaraas kordhinta ee Biancocelesti iyo laacibkan ayaa joogsadey, jeer ay laacibka sidoo kale xiisaynayaan Manchester United, Chelsea iyo Manchester City, iyadoo la sheegayo in Lotito uu laacibka ku baayacayo adduun dhan €35m.
Yeelkeede, maaddaama uu qandaraaskiisu dhacayo xagaaga 2018, Inter waxay doonaysaa in laacibka laga siiyo €18-20m, iyadoo sahmiyayaal u dirsatay laacibka si ay u daawadaan kulamada ay Netherlands lakala ciyaarayso Bulgaria iyo Italy.
Kooxaha Chelsea iyo Manchester United oo iskula dheggan Claudio Marchisio